Baby taster: 5/1/11 - 6/1/11
ရွှေကြည်ကိတ်လုပ်နည်း မေးထားလို့ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်က မုန့်တွေတော့ မလုပ်တတ်ပါဘူး။ အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင် ကြက်ကန်းတိုးလို့ ဖြစ်သွားတာနေမှာ ဟီ ဟီ။ ပြီးတော့ ရွှေကြည်ဆနွင်းမကင်းက လည်း လုပ်နေကျမို့လို့နေမှာပါ။
All-purpose flour 115g
ထောပတ် 225g (Butter)
ထောပတ်2teaspoon(Ghee)
Food color (ပန်းရောင်)
နွားနို့ 1/2 Cup
ထောပတ်( Ghee) ကို အပူပေးပြီး ရွှေကြည်ထည့်လှော်ပါ။ ရွှေဝါရောင်ဖြစ်လာရင် အအေးခံထားပြီး ထောပတ်( Butter) ထည့်ပြီးမွှေပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲ ၂နာရီထားပါ။ ကြက်ဥကို စက်နဲ့ချေပါ။ ကြက်ဥချေနေ တုန်း သကြားထည့်ပါ။ နို့ထည့်ပါ။ vanilla extractနဲ့ baking powder ထည့်ပါ။ အရောင်ထည့်ပါ (မထည့်လည်းရပါတယ်) ဂျူံမှုန့်ကို ဖြေးဖြေးချင်းလောင်းထည့်ပါ။ အားလုံးရပြီဆို နှပ်ထားတဲ့ ရွှေကြည်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပြီးမွှေပါ။ ရွှေကြည်သားညှက်လာရင် ဖုတ်မဲ့ဗန်းထဲ ထောပတ်သုတ် ရွှေကြည် အနှစ်လောင်းထည့် ဘိန်းစေ့ဖြူးပါ။ Ovenကို 150ံC ၁၀မိနစ်ကြိုဖွင့်ထားပြီး ရွှေကြည်ဗန်းထည့်လိုက်ပါ။ မိနစ် ၅၀ ကျော် ၆၀လောက်ဖုတ်ရပါ့မယ်။ ဒုတ်ချွန်လေးနဲ့ ထိုးကြည့်ပါ။ ကိုယ်လုပ်တုန်းက သတိမထား မိဘူး။ ပြီးတော့ စနစ်တကျဖုတ်တာလည်း မဟုတ်တော့ အတိအကျမပြော ပြနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဆင် ပြေကြပါစေ။
ရွှေကြည်ကို ကုလားဆိုင်က အထုတ်မှာတော့ Sooji လို့ရေးထားတတ်တယ်။ Suji လို့လည်းရေး တတ်သေး တယ်။ Selimona ဆိုရင်တော့ နေရာတိုင်းမှာ ရှာလို့ရမယ်ထင်တယ်။
တချို့ပုံတွေကို Google ယူထားပါတယ်။
Boiled Salt Duck Egg
သတိရတုန်း တင်ပေးလိုက်တာ တခါက ဘဲဥဆားငံမေးတဲ့ ညီမလေးတယောက်ရှိတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်လာ တာ ခုမှသတိရလို့ တင်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် ဆေားရီးပါ :)
Posted by Baby taster at Tuesday, May 31, 2011 , Links to this post
ဆန်ခေါက်ဆွဲ လုပ်စားဖြစ်တယ်။ ကိုယ်က ခေါက်ဆွဲ မျိုးစုံကို ကြိုက်တတ်ပြီး ကျေးဇူးရှင်တို့က ကိုယ့်လို ခေါက်ဆွဲတွေ မစားတတ်ဘူး။ သူကမွေးကတည်းက ရန်ကုန်မှာ ကြီးလာတော့လည်း ရန်ကုန်ဆိုတော့ ကိုယ့်လိုနယ်က တရုတ်တ၀က် ကချင်တ၀က် ခေါက်ဆွဲတွေ မစားတတ်ဘူး။ သူက ပဲမှုန့်တို့ ရှောက်ရွက်တို့၊ မန်ကျည်းရည်တို့နဲ့ သုပ်တဲ့ အသုပ်မျိုးစုံကြိုက်တယ်။ ကိုယ်က အရိုးပြုပ်ရည်တွေနဲ့ မျှစ်ချဉ်တွေ၊ မုန့်ညှင်း ချဉ်တွေနဲ့ စားရတဲ့ ခေါက်ဆွဲတွေ ပိုကြိုက်တယ်။ ခုလည်း ဆန်ခေါက်ဆွဲလုပ်စားတယ် သူတော့သိတ်မ ကြိုက်ပါဘူး။ ကိုယ်တို့ပဲ ၂ရက်ဆက်တိုက် စားလိုက်ရတယ်။ သူ့မနက်စာ တခါပဲစားတယ်။ ကွေ့သယိုတထုပ် ၂ရက်စားလိုက်ရတယ်။ ဒါကို ဆန်စီးနဲ့လုပ်ရင် ဆန်ခေါက်ဆွဲလို့ ခေါ်ပြီး နန်းလတ်နဲ့လုပ်ရင် လားရှိုးမုန့် တီလို့လည်း ခေါ်တတ်ပါသေးတယ်တဲ့။ တခြားနယ်တွေရဲ့ အခေါ်အဝေါတော့ နောက်တမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တို့ ငယ်ငယ်က ဆန်ခေါက်ဆွဲကို နေ့တိုင်းနီးပါးစားတယ်။ အချဉ်အဖြစ် မုန့်ညှင်းချဉ်သုပ်၊ မျှစ်ချဉ်ပြုပ်နဲ့ မြစ်ကြီးနား ဆောင်းအေးအေးမှာ မျှစ်ချဉ်ပူစပ်စပ်လေးနဲ့ ဆန်ခေါက်ဆွဲ စားရတာ အရမ်းမြိန်တာပဲ။ ခေါက်ဆွဲကို အများဆုံး မျှစ်ချဉ်နဲ့ ၀မ်းတိုဖူးကြော်နဲ့ ပိုကြိုက်တယ်။
ဒါက အမဲနံရိုးကို ဂျင်း(လက်၂ဆစ်ခန့်) ဓါးပြာရိုက်ထည့်၊ ငရုတ်ကောင်းစေ့(အဖြူ) ၁၅စေ့၊ နံနံစေ့ လက်တ ဆုပ်စာ၊ ပဲငံပြာရည်အကြည့်၊ အချိုမှုန့်တို့ထည့်ပြီး နူးနေအောင်ပြုပ်တယ်။ အသားနူးအိသွားရင် ဆယ်ပြီးခြေထား၊ အစေ့အဆန်လေးတွေဖယ်ပြီး အဲ့ဒီအချိုရည်ထဲ ကော်မှုန့်၃ဇွန်းလောက်အရည်ဖျော်ထည့် ဆူပွက်လာပြီး စေးပျစ်ပျစ်လေးဖြစ်ရင်၊ နူးအိနေတဲ့ အမဲသားကို ထည့်ပြီးရောမွှေထားတာပါ။ အရင်တုန်း က တော့ဝက်သား ၃ထပ်သားနဲ့ လုပ်စားတယ်။ ၀က်သားစားသူများအတွက်က ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
ဆိတိုဖူးကို ရေဆူနဲ့ဖျော်ပြီး ဆီနဲနဲထဲထည့်ကျို၊ ဆားနဲ့အချိုမှုန့်နဲနဲထည့်၊ အေးလာရင် ကြက်သွန်ဖြူ များ များကို ညှက်နေအောင်ထောင်းပြီး ဆိတိုဖူးဖျော်ထဲထည့်ထား။ ကြက်သွန်ဖြူစိမ်း အနံ့သင်းနေပါစေ။ ဒါမှပို စားကောင်းတယ်။
မြေပဲဆီကို၊ နှမ်းဆီ နဲနဲရော ပူလာရင် နာနတ်ပွင့် တခုထည့်၊ မီးပိတ် အနည်းငယ်အေးလာရင် တရုတ်မဆ လာမှုန့်ထည့်ပြီး ဆီမွှေးလုပ်ထား။
ကြာညို့( ပဲငံပြာရည်အနှောက်) အသင့်ပြင်ထား
ငရုပ်သီးခြောက်ကို ဆီများများနဲ့ကြော် ထောင်းပြီးဆီထဲပြန်စိမ်ထား။ မြစ်ကြီးနားမှာတော့ တရုတ် ကချင် ခေါက်ဆွဲဆိုင်တိုင်းလိုလို ဒီလို ငရုပ်သီးထောင်းပဲရတတ်တယ်။ ပိုမွှေးပြီး ပိုစပ်တယ်။
ကြက်သွန်မိတ်( ခေါက်ဆွဲဆိုင်တွေမှာ နံနံပင်ထက် ကြက်သွန်မိတ်ပိုသုံးကျတယ်)
တိုဖူးကို ဒီလို အရွယ်တော်တွေ တုံးပြီး ကြွပ်ရွနေအောင်ကြော်ပြီး ၀က်ခေါက်ကြော်နဲ့ တွဲပြီးလာချပေးတတ် တယ်။
တရုတ်မုန့်ညှင်းချဉ်ကို ကြာညို့၊ မြေပဲဆီကျက်၊ နံနံပင်နဲ့သုပ်ပြီး လာချပေးတတ်တယ်။ မျှစ်ချဉ်ရှိလည်း ဆနွင်းနဲ့ နူးနေအောင်ပြုပ်ပြီး လာချပေးတယ်။
အပေါ်က အဆာပလာတွေ အကုန်ထည်ပြီး စားလို့ရပါပြီ။ ဆီတိုဖူး၊ ပဲငံပြာရည်နဲ့ အသားပြုပ်တို့မှာ အငံ ပါပြီးသားမို့ ဆားနဲ့အချိုမှုန့်ကို မထည့်ပါဘူး။ ပဲရွက်က ၀ယ်ထားတာကြာလို့ ဟိုနေ့က ဟင်းချို လုပ်သောက် လိုက်တယ်။ မကျန်တော့ မထည့်ရဘူးပေါ့။
မြေပဲထောင်းပါတယ်။ မထည့်ရပါဘူး။ ကျေးဇူးရှင်ကြိုက်လို့ထည့်ပေးတာပါ။ အရိုးပြုပ်တဲ့ ဟင်းခါးနဲ့တွဲစား ကြပေမဲ့ အိမ်မှာတော့ မလုပ်ဖြစ်ဘူး။
ကျေးဇူးရှင်စားတဲ့ ပန်ကန်ပါ။ ဒီလောက်ကို မနည်းစားလိုက်တယ်။ ဖင်ကပ်တောင်ချန်ထားသေး။ ကိုယ် လား ? ဟင့်အင်း မေးနဲ့ကွယ် ရှက်တတ်လို့ပါ :P
Posted by Baby taster at Monday, May 30, 2011 , Links to this post
ခုတလော စိတ်ညစ်စရာတွေ များနေတယ်။ ဘလောဂ့်တကာရောက်ပေမဲ့ ကောမန့်မပေးပဲ တိတ်တိတ် လေးပြန်လာတယ်။ မိသားစုဝင်တွေ တခုခုဖြစ်လာတိုင်း ကြုံရတိုင်း ကိုယ်တွေ အနီးကပ်ဘာတခုမှ မ လုပ်ပေးနိုင်တာ ၀မ်းအနည်းဆုံးပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကနေ စိတ်ညစ်စရာတခုပြီးတခု ဖြစ်လာတာ ကြာရင်ရူး တောင်ရူးချင်လှပြီ။
ပလာတာ ၀ယ်လာပြီး ကြော်စားထားတာပါ။ ပလာတာကလည်း ငရုပ်သီးစိမ်းပါတာပဲ။ ဘာမှမချက်တော့ ဘူး။ ရှိတဲ့ ဘလာချောင်ကြော်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူသနပ်တို့နဲ့ပဲ စားလိုက်တာ။ ကျေးဇူးရှင်က ကော်ဖီ၊ ကိုယ်က ရေနွေးကြမ်းသောက်တယ်။
ရွှေဥဒေါင်း ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ပဲပြားကြော်၊ သခွါးသီး၊ဆီကျက်၊ ပဲမှုန့်လှော်များများနဲ့ စီးစီးလေးသုပ်တယ်။
လွယ်လွယ်လေးပဲ ပုစွန်ခြောက်နဲ့ ပဲပင်ပေါက် ဟင်းခါး လုပ်တယ်။
ကြာဇံကို ပဲသီး၊ ပန်းမုံလာ၊ မုံလာဥနီ၊ ကြက်ဥ၊ ကြက်သားတို့နဲ့ ရောကြော်တယ်။
ခေါက်ဆွဲဖတ် ၀ယ်လာတာ။ ဘာမှမလုပ်ချင်လို့ ခရုဆီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ။ ကြက်သွန်မိတ်နဲ့ တရုတ် ငရုပ်ဆီနဲ့ ကြော်လိုက်တယ်။
ကျန်တဲ့ခေါက်ဆွဲဖတ်ကို အမဲသား ခရုဆီကြော်ထားတာနဲ့ ရောကြော် စားပြန်တယ်။
ဘိန်းမုန့် လုပ်ကြည့်တာ တော်တော်ကြာပြီ။ ကြာဆို ၃လလောက်ရှိပြီ :D မဖြစ်ဘူး ဒါပေမဲ့ စားလို့ရတယ်။
ဘိန်းမုန့်မရတာနဲ့ လက်မလျော့ပဲ ရွှေကြည်ကိတ်လုပ်ပလိုက်တယ်။ အရမ်းကောင်းလို့ ခဏခဏ ပွဲတောင်း ပေမဲ့ ပျင်းတယ်။ စိတ်ကူးပေါက်ရင် လုပ်ကျွေးအုံးမှာပါ။
ခုတော့ လာလည်သူတွေလည်း တဖဲ့လောက်စားသွားကြပါအုံး :)
Posted by Baby taster at Sunday, May 29, 2011 , Links to this post
ထိုင်းအမဲသားသုပ်၊ ပဲရွက်ဟင်းချိုနဲ့ ဘိုစားပဲသီးအစိမ်းကြော်
အမဲနံရိုး ၀ယ်တာများသွားလို့။ အပေါ်ထပ်မှာ ငှါးနေတဲ့ ကောင်လေးက အမဲသားဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်တော့ သူ့ကိုမှာလိုက်တာ။ အဆီပါတာလေး ၀ယ်လားပေးနော် ဆိုတော့ စားစမ်းပါအဆီတွေ :D အသေအချာကို အဆီများတာ ၀ယ်လာပေးတယ်။ အီသွားတာပဲ :D
အမဲနံရိုး ကင်တယ်။(ပုံနောက်မှတင်မယ်) တချို့ကို ချဉ်စပ်ချက်တယ်။ တချို့ကို ကင်ပြီး ထိုင်းစတိုင်သုပ် တယ်။ ကင်ပြီးသုပ်ရင် Nam Tok လို့ခေါ်ပြီး ပြုပ်ပြီးသုပ်တာကို Laapလို့ ခေါ်တယ်ထင်တာ ပဲ။ Yam Neuaလည်း အမဲသားသုပ်ပဲထင်တယ်။ (Yam ဆိုတာလည်း သုပ်တယ်လို့ အဓိပါယ်ရတယ် လို့ပြောတယ်) ဘာတွေ ကွဲပြားသလဲတော့ မသိပါဘူး။ ကိုယ်ပြောတာလည်း မှားနိုင်ပါတယ်။
အမဲနံရိုးကို ငံပြာရည်၊ အချိုမှုန့်နဲ့ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နယ်ပြီး ၂နာရီနှပ်ထားပါတယ်။ ပြီးမှ အိုဗင်ထဲထည့် ကင်ပါတယ်။ ၃၅၀ံF မိနစ် ၂၀ ကင်ပြီး ၄၅၀ံF မိနစ်၂၀ ကင်ပါတယ်။ ပြီးမှ အရိုးထုတ်ပြီး ပါးပါးလှီးပါ တယ်။
ပါးပါးလှီးထားတဲ့ အသားကို ပူနေတဲ့ အိုးတလုံးထဲ ရေဆူ(လ္ဖက်ရည်ပန်ကန်တ၀က်)နဲ့ရောထည့်ပြီး ၊ စပါးလင် ငရုပ်သီးစိမ်း၊ ကြက်သွန်နီ၊ ပူစီနံ၊ ငရုပ်သီးလှော်မှုန့်၊ ဆန်လှော်မှုန့်၊ ကြက်သွန်မိတ်၊ သံပုရာသီး၊(အရည်ညစ်ပြီ) ငံပြာရည်၊ အချိုမှုန့်တို့ကိုထည့်ပြီး သုပ်ရုံပါပဲ။ အဆာပလာနယ်ပြီး သုပ်ပြီးရင်၊ မီးပိတ်လို့ရပါပြီ။ ဘိုင်ဝရဖာ (Sweet Thai Basil)၊ ပဲတောင့်ရှည်၊ ဂေါ်ပီထုပ်နဲ့ တွဲပြီး လာချပေးပါတယ်။ ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ တွဲစားကြတယ်။ အိမ်မှာတော့ ထမင်းနဲ့ပဲပေါ့။ဟိုအရင်က ဒီမှာ ကြက်သားသုပ်နဲ့ ဒီမှာကတော့ ထိုင်းစတိုင် ငါးသုပ်ပါ။
ပဲရွက်၊ ကြက်ဥတိုဖူး၊ ငါးဆုပ်လုံးရောပြီး ဟင်းချိုလုပ်တယ်။
ဘိုစားပဲကို ကြက်သွန်ဖြူဆီသတ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးပါးပါးလှီးထည့်၊ ပဲသီးထည့်၊ ခရုဆီထည့်ပြီးကြော်ထားတယ်။
Posted by Baby taster at Thursday, May 26, 2011 , Links to this post
ခုတလော ဟင်းတွေချက်ပြီ ပုံတွေစုထားတယ်။ ပျင်း နေတာလား?စိတ်လေ နေတာလား?စိတ်ပျက် နေတာလား? စိတ်ဓာတ် ကျနေတာလား? ဘာမှန်းကို မသိဘူး။ တခါ တခါလောကကြီးနဲ့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေး ကို အရမ်းစိတ်ပျက်မိတယ်။ အသက်က 30ကျော်ရှိနေပြီ ဘာတည်ငြိမ်မှုမှ မရသေးဘူး။ တခုခုဆို အဆိုးဆုံး အထိတွေးပြီး သောကဖြစ်နေတတ်တယ်။ ခွဲစိတ်ရမှာ သေချာပေမဲ့ ဘယ်တော့ဆိုတာတော့ မသိသေးပါ ဘူး။ ခုလို ဂရုတစိုက် ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ မောင်နှမတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကြက်သားဝယ်လာတာ အဆီတွေနဲ့အရေခွံတွေ များနေလို့ ကြက်ဆီထမင်း ချက်ကျွေးမယ်လုပ်တော့ ဖြူဖတ်ဖတ်ကြက်သားတော့ မစားချင်ဘူးနော်တဲ့။ ဒါနဲ့ ကြက်ဆီနဲ့လှော်ထားတဲ့ဆန်ကို ပဲလုံးထည့်ပြီး ချက်လိုက်တယ်။
ကြက်ဆီတွေကိုဆီနဲနဲနဲ့ ကြော်ပြီဆီထုတ်ပါတယ်။ ဆီထွက်လာရင် ကြက်အရေခွံနဲ့ အဆီဖတ်တွေဖယ် ထုတ်လိုက်ပြီ ကျန်တဲ့ဆီမှာ နာနတ်ပွင့် တပွင့်ထည့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ဓါးပြားရိုက်ထည့်၊ နံနံပင်အမြစ်ထုထည့်၊ ဆန်ကိုရေဆေးပြီး ထည့်လှော်ပါတယ်။ ဆန်အရောင်လေးနဲနဲဝါလာရင်၊ ပဲငံပြာရည်အနှောက်ထည့်၊ ပဲလုံးထည့်ပြီး ထမင်းပေါင်းအိုးထဲထည့် ရေဆူ အနေတော်ထည့်ပြီး ချက်လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ တွဲစားဖို့က ကြက်သားကို အစပ်ဆီပြန်ချက်ထားပါတယ်။
ပဲလုံးပါတဲ့ ကြက်ဆီထမင်းပေါ့ :)
ကြက်ပေါင်သားကို ကြက်သွန်နီ/ဖြူ၊ ဂျင်း၊ ငရုတ်သီးအခြောက်၊ စပါးလင်ကို ညှက်အောင်ထောင်း ဆီသတ် ပါတယ်။ ကြက်သွန် အရောင်လှလာရင် အရောင်တင်နဲ့ ဆနွင်းမှုန့် နဲနဲထည့်၊ ကြက်သားထည့်၊ ဆားနဲ့အချိုမှုန့် တခါတည်းထည့်ပြီး ဆီပြန်လာချက်ပါတယ်။ ဆီပြန်လာမှ မဆလာအုပ်ပါတယ်။
သခွါးသီးနဲ့ ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီးပြီး ဗီနီကာနဲ့ စိမ်ထားပါတယ်။ ပြီးမှ ဆယ်ပြီ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ဆားအချိုမှုန့် ထည့်သုပ်ထားတယ်။ နံနံပင် ကုန်နေလို့ မထည့်လိုက်ရဘူး။
ဘလာချောင်ကြော်ပါ။ ဟိုတခါကြော်ထားတာ။ ဒီပုံကလည်း ပလာတာစားထားတုန်းက ရိုက်ထားတာ :)
ကြက်သွန်ဖြူ သနပ်ပါ။ အိန္ဒိယဆိုင်က ၀ယ်လာတာပါ။ စားလို့ ကောင်းတယ် ကြိုက်တယ်။ ကုလားပဲခြမ်းနဲ့ ရောချက်တာ စားလို့ ကောင်းမှကောင်း။
ပုံတွေ ကြီးလို့ မမြင်ရဘူးပြော ကြလို့ပါ။ နဲနဲလျော့လိုက်တယ် သည်းခံပါ :)
Posted by Baby taster at Monday, May 23, 2011 , Links to this post
မောင်လေးရာဇာ(ကျေးလက်သားလေး)က တဂ့်တယ်တဲ့။ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသော စိတ်ဆန္ဒလေး များ။ သတိတရ တဂ့်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါ၏။
၁။ အစားချင်ဆုံးသော အစားအစာ - ငရုပ်သီးထောင်း ချဉ်စပ်( အစာအိမ်ရောဂါကြောင့် ချဉ်စပ် မစားရတာ တနှစ်ရှိနေပြီမို့လို့ :( )
၂။ နေ့တိုင်းစားဖြစ်တဲ့ အစားအစာ - ထမင်းနဲ့ အသီးအရွက် ရေလုံပြုပ်
၃။ အလိုချင်ဆုံးရေမွှေး - မရှိပါ။ တန်ရာတန်ရာပဲ မှန်းတာအကောင်းဆုံးပါ။
၄။ သုံးဖြစ်နေတဲ့ရေမွှေး - ARMANI CODE For Women By GIORGIO, Private Collection Jasmine White Moss
၅။ အလိုချင်ဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင် - မရှိပါ။
၆။ အလိုချင်ဆုံးဖုန်း - မရှိပါ။ ဆက်သွယ်လို့ရရင် ပြီးရောပေါ့နော်။
၇။ သုံးဖြစ်နေတဲ့ဖုန်း - iphone 4G
၈။ အရူးသွပ်ဆုံးအရာ - ဘာမှမရူးသွပ်ဘူး။ ဘာမှမစွဲလန်းတတ်ဘူး။
၉။ အနီးစပ်ဆုံးဂီတ - သီချင်းနားထောင်ခြင်း ( သံစဉ်ကောင်းလေးတွေ။ ကော်ပီမဟုတ်ပါ။)
၁၀။ အလိုချင်ဆုံးစာအုပ် - မရှိပါ။
၁၁။ အခုဖတ်ဖြစ်နေတဲ့စာအုပ် - အွန်လိုင်းက စာတိုပေစ အကုန်ဖတ်တယ်။
၁၂။ အကြားချင်ဆုံးစကား - မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရပြီဆိုတာ။
၁၃။ အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒ - မြန်မာပြည်သူ/ ပြည်သား အားလုံးကို လူပီသစွာ နေထိုင်စေချင်တဲ့ဆန္ဒ။
၁၄။ အလိုချင်ဆုံးဆု - မိသားစု အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါစေလို့။
၁၅။ အသွားချင်ဆုံးနေရာ - မြန်မာပြည်
၁၆။ သွားဖြစ်တဲ့နေရာတွေ - အလုပ်နဲ့ အိမ် ၊ ဈေးဝယ်
၁၇။ အကြည့်ချင်ဆုံးရုပ်ရှင် - အကြည့်ချင်ဆုံးရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ (ပေါက်တကရ ငွေရရင် ပြီးရော ကားမျိုး မဖြစ်ရင် ပြီးတာပဲ )
၁၈။ အပြောချင်ဆုံးစကား - ကိုယ်က စကောင်းပါ။ သူ့နေရာမှာ ၀င်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာပါ။
၁၉။ အယုံကြည်ဆုံးလူသား - ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား။ ယုံကြည်စရာကောင်းအောင် အလုပ်နဲ့သက်သေပြတဲ့ တချို့ သောလူသား။
၂၀။ မယုံကြည်ဆုံးအရာ - မြန်မာပြည် အခြေအနေ ကောင်းလာတော့မယ်ဆိုတာ
၂၁။ အမုန်းဆုံးအရာ - အပြောနဲ့အလုပ် ညီအောင်မလုပ်တဲ့လူတွေ။
၂၂။ အသောက်ဖြစ်ဆုံးအအေး - ရေပဲသောက်တယ်။
၂၃။ လတ်တလော အထိတွေ့ဆုံးအရာ - ဖုန်း
၂၄။ မကောင်းတဲ့ ကျန်းမာရေး - အစာအိမ်လေနာဖြစ်ခဲ့လို့ ဆေးသောက်နေရတယ်။
၂၅။ အကောင်းဆုံးအဖော် - တရား
၂၆။ လက်ရှိအကြိုက်ဆုံးသီချင်း - သံစဉ်ကောင်းတဲ့ သီချင်းတိုင်း ကြိုက်ပါတယ်။
၂၇။ အကြောက်ဆုံးအလုပ် - ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါး စိတ်ဆင်းရဲမှာကို။
၂၈။ တန်ဖိုးအထားဆုံးအရာ - ကိုယ့်ကျင့်တရား
၂၉။ အကြောက်ဆုံးတိရိစ္ဆာန် - ခူယား၊ မျော့၊ ဘောတ်ဖတ်လို ပျော့စိစိအကောင်တွေ အကုန် ကြောက် တယ်။
၃၀။ တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ဘလော့ဂါတွေ - အရင်က ကိုကြီးကျောက်ကို တွေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။
၃၁။ အပြင်သွားတိုင်းပါတဲ့ပစ္စည်း - အိတ်ကြီးကြီးတလုံးထဲမှာ အစုံပေါ့။ မိန်းကလေးဆိုတော့။
၃၂။ သွားဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေ - ၁၆မှာ ဖြေပြီးပြီ။
၃၃။ စိတ်အညစ်ရဆုံးအချိန် - Bill ပေးတဲ့အချိန် :)
၃၄။ အနေချင်ဆုံးနေရာ - ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေဆုံးနေရာ
၃၅။ ကြားလိုက်မိတဲ့ဟာသလေးတစ်ခု - ထောင်ဒဏ် ၆၅နှစ်သမားတွေ ရှော့ပေါ့ကြောင့် ၆၄နှစ်တဲ့ ဟဟား
၃၇။ ပေးချင်တဲ့ သတင်းတစ်ခု - မကြာခင်ချိန်အတွင်းမှာ ခွဲစိတ်မှု တခုပြုလုပ်ရမှာ :(
၃၈။ အပျော်ဆုံးဖြစ်မယ့်အချိန် - မိသားစု ပြန်လည် စုံတွေ့မဲ့နေ့။
Posted by Baby taster at Saturday, May 21, 2011 , Links to this post
Posted by Baby taster at Sunday, May 15, 2011 , Links to this post